Mandjar Maisonette - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCj
IMandjar Maisonette yindawo eqaqambileyo, enesitayile, egcinwe kakuhle esecaleni kolwandle embindini weMandurah Foreshore Precinct, iimitha ukusuka kwindawo zokutyela ezingasemanzini, iikhefi, icarnival, ithiyetha, kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa. IMandjar Maisonette yiflethi ekumgangatho ophantsi kwindawo encinci, injongo eyakhelweyo ukuhlalisa izizukulwana zeendwendwe apha ukuze zonwabele indlela yokuphila yaselwandle yaseMandurah.
Indawo yokupaka yabucala iyafumaneka kwisithuthi esinye; ukuba unesinye isithuthi, indawo yokupaka eyaneleyo iyafumaneka ngaphaya kwendlela. Ukuba unqwenela ukupheka, ikhitshi inezinto zokupheka ezikumgangatho ophezulu, kunye nestovetop yokungenisa i-ceramic, ene-oveni ebanzi enesisa. Kukwakho nomatshini we-espresso, & neketile yeti, kwiimfuno zakho zeti nekofu. Ukupholisa iifeni zesilingi ezinendawo ekude, ixesha, kunye nemowudi yokulala, zibekwe kwindawo yokuhlala, kunye namagumbi okulala omabini. Iflethi ikhuselwe elangeni ekuseni nangokuhlwa. Igumbi lokuhlala libonisa i-TV ehlakaniphile ene-Nexflix ekulungele ukubukela; Ungaphinda usasaze ukusuka kwisixhobo sakho ukuya kumabonwakude ngesantya esiphezulu se-wifi. Ishawari kukuhamba okuthe tyaba, kungekho manyathelo okanye imiqobo, kunye ne-washer-dryer nayo ikhona kwindawo yokuhlambela. Ngeyadi yangasemva yabucala, iMandjar Maisonette ikwanika iindwendwe indawo yangaphandle yokuphumla ngokuzolileyo. Iqula lokuqubha likwisiphelo sentshona yekhompleksi; ifikeleleka ngesitshixo kude kube yintsimbi yesi-8pm mihla le (ngexesha lonyaka kuphela, & ngokuxhomekeke ekufumanekeni - ichibi liya kuvalwa kwiinyanga ezipholileyo, & nokugcinwa kumaxesha ngamaxesha).
4.94 · Izimvo eziyi-265
IMandjar Maisonette imi kumbindi weMandurah, ixeshana ukusuka eMandurah Foreshore, iMandurah Ocean Marina, kunye noLwandlekazi lwaseIndiya – kunye nazo zonke iindlela zenkcubeko kunye nezokutya kwesi sixeko singaselwandle. I-Inlet yindawo ekhethekileyo, kungekhona nje njengesango lokungena kuLwandlekazi lwaseIndiya. Kwibali lendalo likaNoongar, kwakukho imbalela, ngoko ke abaDala babiza umdali wabo, kwaye umdali waphuma emanzini ekwimo yenyoka, ababeyibiza ngokuthi nguWagyl. UWagyl wayeluhlaza kwaye engwevu eqhumayo, ngoko ke wayengabonakali emanzini. Yaphuma elwandle, kwaye endleleni yayo kwakhiwa indawo yokungena. Namhlanje, i-inlet isengundoqo wobomi baseMandurah.
Umbuki zindwendwe ngu- Cj
Ukuba unemibuzo malunga nendawo okanye iimpawu ze-i, nceda umyalezo we-AirBnB, okanye isicatshulwa kude kube ngu-10pm. Emva kwentsimbi yeshumi ebusuku, imibuzo inokuphendulwa ngosuku olulandelayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mandurah